▷ 🎮 Okumaphakathi 【Buyekeza Futhi Ulande ✅】 - 【Ukuqhathanisa】 2022
🎮 Medium 【Buyekeza futhi ulande ✅】
Imidlalo yevidiyo | 0 Amazwana
Isilawuli kude Esihambisanayo Sokushintsha / Shintsha i-Lite / Shintsha i-OLED, Isilawuli Sesilawuli Se-Bluetooth Esingenantambo ...
I-Spiritfarer iwumphathi opholile we-2D nomsakazi, kodwa ngaphandle kwalokho, wuhambo oluhle nolujabulisayo lokunakekela abanye, ukuvuma ukufa, nokuvalelisa.
Izinto zilula ku-Spiritfarer njengoba konke akwenzayo ukusiza abanye. Lo mdlalo omuhle kakhulu ukukulayisha ngempahla eyigugu kakhulu: imimoya eyenza isinyathelo sayo sokugcina ngokusebenzisa iplanethi engelona iqiniso ephakathi kwethu nelandelayo. Njengomsebenzi Womoya, kuwumsebenzi wakho ukusiza le miphefumulo ngezikhathi zayo zokugcina ngaphambi kokuba idlule ingunaphakade. Lo msebenzi ushintsha ngokushesha ube yinjabulo njengoba yonke intshi yale planethi kamoya yembulwa ngenjabulo nokumangala. Ngomdlalo wokufa nokudedelwa, i-Spiritfarer ijabule, igcwele ukukhanya nokuphila, ngaphandle kokuyeka ukuba yiqiniso ngokumangazayo enjongweni yakhe.
I-Spiritfarer iyisiteji se-2D esinomthamo omkhulu wokwenza nokuphatha. Umsebenzi wakho uwukuzulazula olwandle, vakashela iziqhingi, izimpawu zomhlaba kanye nezinto ezididayo ukuze uqoqe futhi uthuthukise amakhono akho ngokuthola izitolo, izinsiza kanye nezindawo ezingcwele ezinikeza amakhono. Impilo yakho njenge-Spiritfarer ayiyona nje isikebhe semiphefumulo ekhohlakele. Kunalokho, ukhona ukuze usize. Kungaphezu nje kokuzwa izindaba zokuphila ezedlule nokufunda mayelana nezivakashi zakho; nabo banezidingo okumele bahlangabezane nazo ngaphambi kokuthi baqhubekele phambili.
Abanye bangase bafune ukudla okudliwayo ukuze bakukhumbule, futhi uzodinga ukuthola izithako nezindlela zokupheka ukuze uzipheke. Abanye bangase bakujabulele ukuvakashela izindawo ezibashukumisa ingqondo, noma bafunde nokukhululeka bebodwa. Ulwazi nezinto ozoza nazo emkhunjini wakho zizosiza ibhizinisi lakho ukuthi likhule. Uzodala ikhaya lesikhashana lemimoya enquma ukujoyina wena, unakekele izidingo zabo ngenkathi uqinisa ikhono lakho lokwenza lolu hambo lube nokwenzeka, ukuze kuthi lapho kufika owokugcina, nawe usulungile.
Kunezingxenye eziningi ezihambayo zalolu hlelo lokusebenza. Ngenhlanhla, i-Spiritfarer ihlanganisa ngekhono inqwaba yamathuluzi ku-Everlight esebenzayo, uhlobo lommese wamasosha waseSwitzerland. Le pendant ekhanyayo ihlobisa kokubili umlingiswa oyinhloko uStella kanye nekati lakhe u-Daffodil (okudlalwayo ngemodi yokubambisana) futhi iguqulela ngokomongo ukuze ukwazi ukugcwalisa inhlobonhlobo yemisebenzi. Awusoze wakwenza ngaphandle kwayo futhi ngeke iphuke: I-Everlight ikhona kukho konke okwenzayo futhi umlingo wayo wenza yonke into ibe lula kakhulu. Iqeda umsebenzi oyisicefe wokuhambisa nokugcina amathuluzi atholakala kweminye imidlalo yokuphatha, futhi naphezu kwalokhu kuhlanganiswa, zonke izenzo ze-Everlight ziyaqhubeka nokubukeka zihlukile.
Ukudedela ingcindezi ende, enejubane eliphelele ukuze ugcwalise isizinda, kuhluke kakhulu kusukela ekunyakazeni oya phambili nangemuva kwesithupha ukuze ubone isihlahla noma uvele ucindezele inkinobho ukuze unisele isitshalo. Lokhu kuyasebenza nasekusetshenzisweni kwezinsiza zezandla. Ukucindezela okude kakhulu ku-loom kuhluke ngokuphawulekayo kuzinkinobho zokuchoboza kumshini wokugaya. Ngisho nokusebenza ngezinto ezihlukene kuma-workshops kuzozwakala kuhlukile, njengokungathi izinsimbi kufanele zibambe ezindaweni ezithile zokushisisa ngesikhathi sokuncibilika. Kunenhlanganisela enhle yobulula nobuningi evimbela izenzo eziphindaphindayo ekuzizweni zingenalusizo futhi kukwenze uzizwe ubandakanyeka kakhulu. Ngakujabulela kakhulu ukwenza yonke le misebenzi emincane yomndeni phakathi nomdlalo wami, okuyisimangaliso esincane.
Umjikelezo wokuthola izinsiza bese uziletha endaweni yakho ukuze udale izinto unomvuzo ongapheli. Ukuthola isithako esisha sokudla kwakufana nokuthola iplanethi yezenzakalo futhi nginyakaziswa izitsha ezintsha engangingazipheka. Ukutholakala kwezimbiwa ezintsha kungavula amandla ezakhiwo ezintsha, futhi izakhiwo ezintsha zingangivumela ukuba ngiguqule leyo mineral ibe yinto entsha. I-Spiritfarer isashiya isikhala sokuhlola kokudala: Kunoma ubani owake wazibuza ukuthi yini engenzeka uma ubeka ibhuthi endala endaweni esekelwe kuyo noma ufuna ukuphotha insimbi, isethi ikumboze ngendlela emangalisayo nemangalisayo. Uzwa sengathi ngaso sonke isikhathi nakuzo zonke izimo kunokuningi okunye ongakuthola phakathi nesikhathi somdlalo, kodwa hhayi kakhulu ukuze ungalahlekelwa umuzwa wakho owanelisayo wokuphatha kahle lezi zinto kanye nendlela yokuthola okuningi kuzo.
Njengoba amakhono akho nezinsiza zakho zikhula, umkhumbi wakho uzobonisa lokhu. Izindlu zizokwakhelwa ukukhoselisa imiphefumulo eyahlukene eniyithintile, futhi nizobona namakhishi, izingadi, ama-looms kanye nazo zonke izinhlobo zezinye izinkonzo zomphakathi. Njengoba uthuthukisa, ungabeka izakhiwo ezintsha cishe noma yikuphi emkhunjini wakho, okusho ukuthi izingadi zingahlala emashedeni futhi izindlu zingapakishwa enye phezu kwenye, ngezitebhisi ezingenakubalwa ezifika esibhakabhakeni phezulu.kusuka ebhulohweni lakho. Umphumela uba isitsha esihle njalo nakuzo zonke izimo sibukeka njengesaso. Ngenxa yokuthi ngangifaka (futhi ngezinye izikhathi nginyakaze futhi ngishintshe) yonke into emkhunjini, ngakwazi ukuyifaka ngaphakathi futhi nginyakaze sengathi ngihlala lapho ngempela. Ngenhlanhla, isakhiwo ngasinye sibonakala ngokushesha, futhi ngemva kwalokho ngakwazi ukwengeza izinto eziwelayo njengemigqa ye-zip kanye nomata abagxumayo, okungivumela ukuthi ngishwibe eduze nendawo yami yokukhosela entantayo ngokusebenza kahle okukhulu kanye nenjabulo yangempela.
Okuningi kwaleyo njabulo kuvela ekusebenzeni kwesikhulumi se-Spiritfarer, esilula, esisebenzayo nesiwuketshezi. Ukunyakaza kumnandi futhi kuba ngcono uma ukujwayela. Ukulimala noma ukufa ngendlela evamile yemidlalo akuyona into ebuyisela emuva, ngakho-ke kukhona njalo futhi kuzo zonke izimo umuzwa wokuphepha okuvumela ukuthi uzame, futhi inkimbinkimbi yezinselelo zenkundla ngokuvamile incike emandleni akho. . Ukwenza uchungechunge lokunyakaza (futhi kuqinisekile ukuthi kuzoba Ongakukhetha). Ukunyakaza okusha kuvulwa ngokuthola izindawo ezingcwele, kodwa akuzona zonke ezinembile ukugcwalisa umdlalo. Sesikushilo lokho, ikhono ngalinye elisha lijoyina i-repertoire yobulula onganyakazisa ngayo kanye namakhono wokuhlanganisa njenge-rebound, i-ziplining, ukushelela, kanye nokugijima kuyinjabulo. Kunomuzwa omkhulu wokungabi namanzi - kuzwakala kungokwemvelo ukusebenzisa ithuluzi ngalinye kunqolobane yakho yokunyakaza, ngisho noma linganembile kakhulu. Ukwazi ukunyakaza ngokushesha nangokucabangayo kugeyimu lapho uqhubeka ugijima usuka kwesinye isakhiwo uye kwesinye nakho kusiza ukweqa ezenzweni zemishini eziqinile ze-Everlight ngokuthile okumahhala nokuketshezi. Ama-animation abushelelezi, adwetshwe ngesandla nawo ahamba ibanga elide ekwenzeni ukunyakaza kubambeke ngokuphelele. Ngangikuthanda ukubuyela emuva ukuze ngivakashele izindawo ezinamandla amasha ukuze ngithole izimfihlo ezisizayo, ngisho nalapho kwakungafanele, ukuze nje ngibone ukuthi ngingafika ngokushesha kangakanani endaweni.
Lokhu kunakekela ocelwa ukuba ukunikeze i-Rebel Souls kubonakala kahle ekwakhiweni komdlalo njengoba, njengomdlali, nami ngazizwa ngikhathalelwa. Konke okwenzayo e-Spirtfarer kulula njengephupho elicacile lapho izinto zingahamba ngendlela yakho kuphela. Kuncane okusengozini; ngokuphelele akekho ongalimala futhi inqubekelaphambili ngayinye ithuthukisa impilo yothile kuphela. Kubonakala kuzinketho eziningi ezincane, njengendlela uphahla lwegumbi labasebenzi bomkhumbi wakho olwehlelayo ngaphakathi, okuvimbela umdlali wasesiteji oshiseka ngokweqile ukuthi angawi. Uma ukhetha ukugxuma ngamabomu, isikebhe simane sime silinde. Akukho monakalo, akukho mkhawulo wesikhathi futhi akukho ukwesaba, ngaphandle kokwesaba ukuvalelisa, isihloko esiphathwa ngendlela yochwepheshe ngokucophelela.
Uzochitha isikhathi esiningi emkhunjini wakho uzulazula futhi uhlola iziqhingi ezintsha, yile ndlela ozothola ngayo imimoya edinga izinsizakalo zakho. Le mimoya ayihlali nje okwesikhashana emkhunjini wakho, lapho ungaxhumana khona futhi ujabulele inkampani yakho njengomthetho ojwayelekile, kodwa futhi unikeze ukuhlakanipha okuthile ukukusiza uchume. Ngaphandle kokukusiza ukuthi ufunde amathuluzi amasha, angakunikeza ezinye izinzuzo. Bangasiza ngokulungisa okuvamile, banikeze izinsiza, noma bamane benze ukuphila kujabulise; abanye bazodlala umculo uma bejabule, okuzokhuphula isimilo sabanye abasebhodini. Phela, ukuba seduze kwabantu abakhuthazayo kuvame ukuthathelwana.
Kodwa imimoya ngokwayo ingaphezu kwamathuluzi awusizo namanodi ezinsiza; nazo ziyizinhlamvu ezithakazelisa ngempela. Iningi liyayazi impilo yomlingiswa; Abaningi bayazi futhi banezindaba ngoStella, abanye basahlobene, kanti abanye babonakala bebazi ukufudumala kwakhe. Ngamunye wabo ungumuntu wakhe, futhi nakuba ngangingabathandi abalingiswa abathile njengabanye, ngaqala ukuzwelana nezindaba zabo. Bonke bayimiphefumulo, eqondayo ukuthi izinto kumele ziphele, futhi zonke ziziphatha ngendlela ehlukile.
Omunye umlingiswa ugajwe yicala lokungaphatheki kabi ngokushona kwelungu lomndeni elinobuthi, elingene kimina. Abanye bangikhumbuza abantu engibaziyo, noma abantu engifisa ngabe ngiyabazi, njengomalume onothando ofuna wonke umuntu adle okumnandi. Into eyodwa abafana ngayo bonke wumklamo omkhulu obonakalayo owangikhumbuza opopayi abanempilo nabajabulisayo nezincwadi kusukela ebuntwaneni bami. Umlingiswa ngamunye futhi unopopayi we-hug ofudumele ongenziwa ngendlela oyifisayo ngokugcwele kumklamo wakho; Kuningi okunambitheka kothando nobuhlungu benhliziyo kangangokuthi ngisho njengomuntu ovame ukuzizwa eyisisulu ezindabeni ezinjalo, ngathola izinto eziningi ezifanayo.
Kuyathinta ngokumangalisayo ukuthi umlingiswa ngamunye ekugcineni uyabona ukuthi isikhathi sesiphelile. Kukhona indawo yokuthula nokwamukeleka lapho wonke umuntu efika noma engafuni. Ingqikithi evamile ithi wonke umuntu unesikhathi sakhe nokuthi konke kuhamba kahle. Impilo ababeyiphila kwakungeyabo futhi kungenzeka ukuthi yayibuhlungu, ijabule, noma ingagculisi. I-Spiritfarer iphakamisa ukuthi akukhona ngokubona okuhle ohambweni lwethu phambi kokubi, kodwa kumayelana nokubona uhambo njengolwethu. Izimpilo zethu ziyizindaba ezilotshwe kuphela ukuze senze okusemandleni ethu, noma ngabe kwenzekani, bese sibona isikhathi sethu sesiphelile futhi sithole ukwaneliseka ekukhululekeni okuza nokudedela.
Ungalanda kanjani i-Medium
Ukuzinikela Kwemimoya - Velvet
Karden, Allan (Umbhali)